Home Wararka DFS oo warar isqilaafsan ka soo saartay baaqii Midowga Afrika
DFS oo warar isqilaafsan ka soo saartay baaqii Midowga Afrika
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo qoraal ka baaqii kasoo baxay Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika ee xaaladda is-mari waaga doorashada Soomaaliya, ayaa qoraalkeeda waxaa ka muuqday warar isqilaafsan isla markaana iska soo horjeeda.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe oo Muqdisho ku qabtay shir jaraa’id ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan qodob ka mid ah qodobada kasoo baxaya Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika, balse ay diidan yihiin laba qodob. Maranaba suuragal ma aha in aad aqabasho qayb kamida qaraarka Midowga Afrika qaar kalana aad diido.
Wasiirka ayaa sheegay in ergeygan uu Dowladda Soomaaliya kala shaqeyn doono sidii ay dalka uga dhici laheyd doorasho qof iyo cod ah iyo sidii Shacabka Soomaaliyeed mar kale gacantooda loogu soo celin lahaa awoodda, sida uu hadalka u dhigay. Dhankal kale waxa uu ka beensheegay qoraalka ku qoranaa qaraarii Midowga Afrika, ma jirtio meel ay ku sheegeen in dalka ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah, balse waxa ay ku adkeeysteen in la taabagalin doono shirkii Sabtembar 17ka.